Fantaro ireo voka-tsoa dimy entin’ny akondro – jEreo Ato
Publié le 29 juin 2019 29 juin 2019 - 2 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes Akondro, Voka-tsoa
Ny akondro dia anisan’ireo voankazo be mpihinana indrindra eran-tany, indrindra any amin’ny tany tropikaly toa an’i Madagasikara. Na ao an-trano atao desera na ho an’ny mpanao fanatanjahan-tena dia mankafy azy ny ankamaroan’ny vahoaka.
Mba ho haintsika kokoa ny momba ity voankazo mavomavo ity dia ndeha hampahafantarina antsika ny voka-tsoa dimy entiny amin’ny fahasalamana.
Mba hanatsaràna ny toe-po
Ny akondro dia manatsara ny toe-po sy ny fahasalamana amin’ny ankapobeny. Izany dia nohon’ny fisiana manieziôma sy vitamina B6 ao anatiny. Raha lazaina fohy dia mitondra hery ho an’ny vatana ny manieziôma ary manampy amin’ny fitobohana ara-pihetseham-po sy ara-tsaina.
Raha ny vitamina B6 indray no ambara dia mandrisika ny famokarana hôrmônina toy ny hôrmônin’ny fahasambarana izy. Izany hoe hihena kokoa izany izay mety fahasosorana amin’ny olona iray raha homana ity voankazo ity izy.
Miady amin’ny fiakaran’ny tosi-drà
Manankarena potasiôma ny akondro. Io mineraly io dia tena manan-danja tokoa ho an’ny any anaty any indrindra ny lalan-drà sy ny fo. Mampihena ny tsindry mafy amin’ny sisin’ny lalan-drà vaventy ny fahazoan’ny vatana potasiôma isan’andro.
Raha tsiahivina kely dia ny fiakaran’ny tosi-drà dia mampitombo be ny mety ho fahatapahan’ny lalan-drà sy ny krisy kardiaka.
Araka izany, ny fihinanana akondro betsaka dia miaro ny fo sy ny lalan-drà. Tsara indrindra ho an’ny fahasalamana izany ity voankazo ity.
Fisorohana homamiadana sasany
Ahitana taha betsaka ana “antioxydant” ao anatin’ny akondro. Io singa io izay afaka hiadiana amin’ny aretina maro indrindra ny homamiadana. Ohatra raha mihinana akondro matetika ny olona iray dia mihena amin’ny ampahany betsaka ny mety hisian’ny homamiadan’ny voa ao aminy. Mihena araka izay ihany koa ny mety hisian’ny homamiadan’ny tsinay be araka ny fandinihan’ny manam-pahaizana.
Mitazona ny fahasalamana
Noho izy manan-karena vitamina C, ny fihinanana tsy tapaka ny akondro dia manampy amin’ny fanamafisana ny hery fiarovana ao anaty. Izany hoe ilaina tokoa amin’ny fiasan’ny taova anaty vatana ny akondro.
Azo atao haingo ihany koa ny akondro ho an’izay liana sy tia.
Ohatra, manampy amin’ny fahasalaman’ny taolana, hoditra, ny hihy, ny nify ny fihinanana akondro. Mampitombo haingana ihany koa ny fahasitranan’ny ratra izy. Noho izy misy vy ihany koa dia mitazona kokoa hatrany ny fahasalamana ity voankazo ity.
Mandrisika ny fizotra ao anaty tsinay
Ny akondro dia ahitana betsaka fibra ara-tsakafo. Io singa io moa dia manamora ny fizotran’ny akora ao anaty tsinay, vokatra avy nahodin’ny taovam-pandevonankanina. Raha sanatria tsy ampy fibra izany ny olona iray dia mety ho tratran’ny fitohanana na aretim-pivalanana mihitsy aza.
Ankoatr’izay dia misy voka-tsoa amin’ny vavony misy fery ny akondro. Raha tsy mbola misy izany ny olona iray dia manampy hiaro tsy ho voa ny akondro. Raha efa misy io aretina io kosa dia manampy amin’ny fanasitranana izany ity voankazo ity.
Toy izay sy toy izay ary ny torohevitra nomena antsika androany. Antenaina hitondra soa ho an’ny besinimaro ny fanolorana izany. Aza adino ny mihinana voakazo sy legioma, indrindra araka ny narahantsika teo dia ny akondro izany.